Yuunivarsiitiin Wallaggaa Akkaadamii Afaan Oromoo hundeessuufi – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsYuunivarsiitiin Wallaggaa Akkaadamii Afaan Oromoo hundeessuufi
Yunivarsiitiin Wallaggaa Akkaadamii Afaan Oromoo dagaagina afaanichaa irratti qorannoo fi qo’annoo hojjetu hundeessuufi.
(bbafaanoromoo)–Afaan Oromoo sadarkaa sagantaa barnootaafi qorannoon dhaabbilee barnootaa hedduu keessatti kennamaa akka jiru kan himan pireezidantiin yuunivarsiitichaa Dr Hasan Yusuuf, guutummaatti dhimma Afaan Oromoo irratti fuulleffachuun bal’inaan hojjechuuf, Akkaadamiin yuunivarsiitichi hundeessu kan jalqabaati jedhan.
Ergama ijoo sadii yunivarsiitiin tokko ittiin hundaa’u baruu fi barsiisuu, hojii qorannoo fi tajaajila hawwaasaa akka ta’e dubbatu Dr Hasan.
“Naannoo keenya naannoo Oromiyaa godhee kan adda baase afaan kana waan ta’eef, afaan naannoon keenya irratti hundeeffame, afaan hojii naannoofi uummata keenyaa kana guddisuu irratti xiyyeeffachuun dirqama yuunivarsiitichaati.”
Kora hundeeffamaa Akkaadaamichaa boru taa’amurratti “hayyoonni kanaan dura aadaa, seenaafi Afaan Oromoo keessatti hojii adda addaa hojjechuun ga’ee guddaa qabaniifi qorannoo adda addaa gaggeessanii uummata biraan ga’an ni hirmaatu” jedhan.
<strongclass=”story-body__crosshead”>Galmi Akkaadamii kanaa maali?
“Nuti akkaadamiin kun akka Oromiyaatti kan jalqabaafi adda dureedha jennee yaadna” jedhu Dr Hasan.
“Afaan Oromoo irratti xiyyeeffachuun baruufi barsiisuu fi leenjii gaggabaabaa kennuun cinaatti Afaanicha irratti qorannoo gaggeessuun afaan teekinoolojii taasisuun yeroo waliin akka deemu taasisuudha mul’anni keenya” jedhan.
Akka Dr. Hasan jedhanitti, Akkaadamiin Afaan Oromoo kun bakka fedhiin jirutti leenjii gaggabaabaa kennuun alatti rakkoo bu’uuraa Afaanichi qabu qorachuudhaan hiikuuf kaayyeeffate.
“Akkaadamiin kun qulqullina barnootaa foyyeessuufis waan gumaachu ni qabaata”
“Naannoo keenya keessatti barnoonni kutaa tokkoo hanga saddetiitti Afaan Oromoon waan baratamuuf Afaan Oromoo guddisuun mataan isaa qulqullina barnootaaf ni gumaacha.”
Akkaadamiin kun boru Waxabajjii 22 banamee ji’oota itti aanan sadiif qophii erga taasiseen booda Fulbaana irraa hojii idilee eegala jedhan Dr Hasan.
Afaan Oromoo kallattii Oromiyaa maraa, fagoofi dhiyoo akka quba walqabaatuufi waalta’u ni taasifama jedhu.
Yunivarsitiin Baahirdaar afaan Oromoofi Gi’iizii barsiisu eegaluuf
Kana gochuuf qophii humna namaa waan qabnuuf humnaa ol nutti hin ta’u. “Waanti guddaan ni dandeenya jechuun itti amanuudha” jedhan.
Afaan Oromoo qofa osoo hin taane, afaanota maatii Kuush ta’an qorachuun walitti dhufeenya qaban cimsuu barbaannas jedhu Dr. Hasan.
Akkaadaamichi Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa Federaalaa Itoophiyaa akka ta’us ni hojjeta jedhu.
“Waaqi ilmee namaa uume, Xaphoo fi Xaphaphoo jedheen” – Aab Liiban Halakee
Yuunivarsiitichi Afaan Oromoo hanga digirii sadaffaatti barsiisaa jiraachuun isaa hojii akkaadamichaaf bu’uura akka ta’us ni dubbatu.